Indlela yokushajwa kabusha umakhalekhukhwini wakho ngokwenkampani yakho
Siphila ezweni lapho ukuxhumana sekubalulekile khona, yingakho sihlala sixhumekile ngamakhompiyutha, amaphilisi futhi ikakhulukazi omakhalekhukhwini.
Abantu abaningi bakhetha ukuqasha isilinganiso se-inthanethi esikhokhelwa kuqala, abanye balawula ibhalansi yabo ngezitolimende ezincane ngezikhathi ezithile, kunoma yikuphi, ukushajwa kabusha kuseyinqubo edingekayo kuwo wonke umuntu.
Izinkampani zokuxhumana zikunikeza izindlela ezihlukene zokushajwa kabusha iselula, ungakwazi ukushajwa kabusha ibhalansi yakho yeselula ku-inthanethi, ngocingo noma mathupha ngokuya kubasebenzeli abagunyaziwe.
Sikutshela konke mayelana nokushajwa kabusha kwefoni kwezinkampani ezinkulu ngaphakathi nangaphandle kwaseSpain.
Gcwalisa iselula ku-inthanethi
Njengamanje, kungenzeka ukushajwa kabusha ibhalansi yakho yeselula kusukela ekunethezekeni kwekhaya lakho noma emsebenzini ngosizo lwekhompyutha enokufinyelela ku-inthanethi.
Izinkampani eziningi zokuxhumana zikuvumela ukuthi ulawule ukushajwa kabusha kweselula yakho ngale ndlela, hhayi eSpain kuphela, kodwa noma kuphi emhlabeni ngemizuzwana nje.
Imisebenzi yokushajwa kabusha kweselula ku-inthanethi ilula kakhulu, vele uye kuwebhusayithi ye-opharetha yeselula, bhala inombolo yocingo kanye nebhalansi ozoyishajwa kabusha.
Ngalesi simiso, unenzuzo yokonga isikhathi esiningi ongasichitha ezindabeni ezibaluleke kakhulu.
Ungakwazi futhi ukugcwalisa ibhalansi yakho kumakhalekhukhwini wakho. Kufanele ube nekhompyutha eyodwa kuphela enokufinyelela kunethiwekhi. Ngokuvamile, uhlelo lokusebenza lumahhala futhi luyatholakala ku-iOS (Esitolo Sezinhlelo Zokusebenza) kanye ne-Android (ku-Google Play), lulande bese ushaje ifoni yakho noma nini lapho ufuna.
Thola ibhalansi yeselula
Nakuba indlela elula yokugcwalisa iku-inthanethi, kukhona nezinhlelo zendabuko zokuthenga isikweletu. Ingashajwa kabusha ngokuthi:
Umlayezo wombhalo (i-SMS)
Izitolo nezikhungo ezigunyaziwe
Isevisi yokushajwa kabusha okuzenzakalelayo
Nakuba, abanye o-opharetha behluka kancane enqubeni, bonke bayahlangana ngenjongo yabo: ukushajwa kabusha ibhalansi.
Okulandelayo, sikushiyela uhlu ukuze ufunde kabanzi ngenqubo yokushajwa kabusha kwamaselula kuma-opharetha ocingo abaluleke kakhulu eSpain:
Shaja kabusha i-Sky
Gcwalisa ikhadi le-Postepay elikhokhelwa ngaphambili
Ukushajwa kabusha kwe-Telekom okukhokhelwa kusengaphambili
Culture Nuri ashona ikhadi
Gcwalisa i-Jazzpanda mobile
Ungashajwa kanjani kabusha e-República Móvil?
Shaja kabusha iselula ekhokhelwa ngaphambili i-MásMóvil. Amanani
Gcwalisa iselula ebhange lakho
Nakuba bembalwa kakhulu abantu abakwaziyo, amabhange aphinde anikeze insizakalo yokushaja kabusha amabhalansi eselula ngokuphepha. Iqiniso liwukuthi ziyanda izinhlangano ezijoyinayo ezisiza le misebenzi yokukhokha kumakhasimende abo.Le sevisi inikezwa kuma-ATM, amahhovisi asebhange noma kusizindalwazi senkundla yebhange ukuze ungaphumi ekhaya.
Amabhange endabuko eSpain abelokhu enikeza le sevisi isikhathi eside. Kodwa-ke, amanye amabhange amancane awakabufaki lobu buchwepheshe ohlelweni lwawo. Ake sibone ngezansi ukuthi yimaphi amabhange aphephe kakhulu ukushajwa kabusha ibhalansi yakho yeselula.
Amabhange amaningi aphinde anikeze isevisi yasebhange ephathwayo. Ngayo, ungakwazi ukushaja kabusha ibhalansi yakho noma ngabe ukuphi, kusukela ekunethezekeni kweselula yakho. Ngokuvamile, uhlu lwama-opharetha eselula olungashajwa kabusha ngaphansi kwale ndlela luningi kakhulu, ukuze kungabikho muntu oshiywe ngaphandle.
Shaja kabusha amaselula ngaphandle kwaseSpain
Manje ukushaja kabusha omakhalekhukhwini ngaphandle kwaseSpain kulula kakhulu. Lapho uhamba ngaphandle kwaseSpain ungaqhubeka nokuxhumana nomndeni nabangane ngaphandle kwenkinga. Namuhla, kunabasebenzisi bezingcingo abahlukene emakethe abahlinzeka ngale sevisi kahle.
Futhi, uma unabangane nomndeni kwamanye amazwe, ungabathumela nebhalansi ngokukhokha ngama-euro. Indlela engcono kakhulu yokushajwa kabusha iselula yakho phesheya ukusebenzisa iwebhu, usebenzisa ikhompuyutha yakho noma ukulanda uhlelo kumakhalekhukhwini wakho.
Kukhona nezindawo zobuso nobuso ezikuvumela ukuthi ukhokhe isikweletu kumaselula akwamanye amazwe. Izindawo noma izikhungo lapho isevisi ikhona yilezi: izikhungo zezingcingo, ama-kiosk, ukuzisiza wena noma izitolo.
Siyazi ukuthi ukuba kude nabathandekayo bakho kungaba nzima, kodwa ngenxa yomlingo wezokuxhumana ungazizwa usondelene kakhulu nabo. Lapha sikubonisa izinketho ezimbalwa ukuze uhlale uxhumene nabathandekayo bakho.
Shaja kabusha iselula evela ePeru
Shaja kabusha iselula evela e-Chile
Gcwalisa iselula evela eBolivia
Shaja kabusha iselula ye-Suop kalula futhi ngokushesha
Gcwalisa iMovilnet yeselula
Ezinye izindlela ezahlukene zokushajwa kabusha iselula
Izinketho zokushajwa kabusha ibhalansi yeselula yakho nsuku zonke zinkulu. Ama-opharetha ocingo akunikeza izindlela ezahlukene zokushajwa kabusha iselula, lapho ungakwazi ukufinyelela inethiwekhi. Isibonelo, ama-ejenti agunyaziwe anikeza isevisi yokushajwa kabusha kwabaqhubi bezingcingo abahlukene noma izitolo lapho ongathenga khona amakhadi akhokhelwa ngaphambili.
Lawa makhadi akhokhelwe eza namanani ahlukene akuvumela ukuthi ukhethe inani lemali ofuna ukufaka ulayini wakho weselula. Ukuzisebenzisa kuqondile, vele ubheke ikhodi yokwenza kusebenze futhi uphinde ugcwalise imiyalelo ngemuva.
Shaja kabusha noma uthenge ikhadi elikhokhelwa ngaphambili: ezikhiqizweni, eposini noma emahhovisi ezentengiso, ezitolo ezikhethekile, egalaji likaphethiloli, ezitolo ezinkulu, ezitolo ezinkulu, ezikhungweni zezokuvakasha, ezikhungweni zezingcingo, njll.
I-inthanethi Yeselula Engenamkhawulo
Kunamazinga avumela abasebenzisi bawo phequlula futhi ulande angenamkhawulo. Emakethe kukhona ama-opharetha anikeza ama-gigabytes angenamkhawulo noma ngevolumu enkulu yedatha, egcina ezimweni eziningi isivinini esifanayo sokuphequlula.
Ngokuvamile, lezi zinhlobo zezilinganiso zingatholwa ngaphakathi kwamaphakheji. E-Spain ezinye zezinkampani ezihlinzeka ngokuzulazula okungapheli noma okungenamkhawulo yilezi: Vodafone futhi Yoigo. Okuhle kakhulu ukuthi ungazisebenzisa kwamanye amazwe e-European Union.
Kukhona futhi ama-opharetha okuthi, nakuba amanani abo engapheli, anenani elikhulu cishe ama-gigs angenamkhawulo ukuzulazula ngokuzolile inyanga yonke. Phakathi kwalezo zinkampani kukhona: I-Movistar, i-Orange, i-Simyo, i-Lowi, i-MásMóvil ne-República Móvil.
Amanani phakathi kwamanani atholakalayo azohluka ngokuya ngedatha enikezwe inkampani yocingo. Lezi zisukela ekuphequluleni okukhawulelwe kuye kokucishe kube okungenamkhawulo kokufika I-50 Gb. Isixazululo salabo basebenzisi abasebenzisa kakhulu i-inthanethi.